Archive du 20190220
Andry Rajoelina Lalaovin’ireo olona manodidina azy ?
Tsy misy filoham-pirenena handeha hanangam-pahavalo ho an’ny tenany, indrindra fa filoha tsy tena marin-toerana tsara tahaka an’i Andry Rajoelina.
Ange Andrianarisoa “Manana ny tsangan-keviny ny AREMA”
Feno iray volana omaly no nitondran`ny ekipan`ny TGV ny firenena. Nitondra ny heviny mahakasika izany ny sekretera jeneraly lefitry ny antoko AREMA, Ange Andrianarisoa.
Raiamandreny sy Tangalamena any Mangoro Niantso ny rehetra hanohy ny fifankatiavana sy firaisankina
Nanao antso am-pitiavana ny zanak’i Mangoro manontolo ireo Raiamandreny sy Tangalamena avy amin’ny distrikan’i Moramanga sy Anosibe
Hugue Ratsiferana Migadra 1 taona, mandoa onitra 5 tapitrisa ariary
Gadra herintaona an-tranomaizina sazy mihatra, miampy onitra 5 tapitrisa ariary no sazy azon’ny mpanolotsain’ny filoha teo aloha Hugue Ratsiferana teo anatrehan'ny fanenjehana azy noho ny raharaha famoahana entana tao amin'ny AMDP (Agence Malagasy de développement économique et de promotion de l'entreprise) tetsy Ambohitsorohitra.
300 mahery no matin’ny kitrotro Tsy homby intsony ny hopitaly
Nanomboka ny alatsinainy lasa teo hatramin’ny 22 febroary izao ny andiany manaraka amin’ny fanaovana vaksiny hiadiana amin’ny kitrotro.
Fakana an-keriny “Eny Fenoarivo sy Ivato no asitrika ireo takalon’aina”
“Eny Alakamisy Fenoarivo Atsimondrano sy manodidina an’Ivato, amin’ny toerana izay mangina no ametrahan’ireo mpanao kidnapping ny takalon’aina mandram-pahazoany ny vola. Efa azo sary aty aminay ireny trano ireny.”
Mihorohoro i Tsaratanàna Namaly faty ny dahalo
Mafana ny toe-draharaha any Tsaratanàna. Re omaly hariva fa namaly faty ireo daholo ka sady nanafika no nandroba ary mbola nodoran’izy ireo ihany koa ny tanàna .
Besarety, Soarano, Mahazo 20 miliara ariary ny tetibola hanadiovana ireo lakandrano
Manohy manadio ny lakandrano ao Besarety ny Boriborintany faha-3 eto amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Fanadihadiana nataon’ny Afrobaromètre Ny polisy, zandary ary mpitsara no tena mpanao kolikoly
Nampahafantarina omaly talata 19 febroary tetsy amin’ny Hotely Colbert ny valin’ny fanadihadiana andiany faharoa nataon’ny tambajotra Afrobaromètre tamin’ny taona 2018.